सलगम एक यस्तो सब्जी हो जो खानामा धेरै स्वादिस्ट लाग्छ। शलगम को सब्जी पोषक तत्वले भरिपुर्ण हुन्छ। भिटामिन ए सी ले भरपुर यसको हरियो पात सलाद को रुपमा पनि खाइन्छ। यसमा कम क्यालोरी हुन्छ, जसले गर्दा सरिर को तौल घटाउन चाहने हरुको लागि पनि यो एक उत्तम विकल्प हो।
फाइबरले भरिपुर्ण यो साब्जी पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्नु को साथै लामो समय देखिको कब्जियत जस्तो गम्भीर समस्याबाट बचाउन मा पनि महत्वपुर्ण सहयोगी भूमिका खेल्दछ। भनिन्छ यदि तपाइले सलगमको सब्जिलाई खानामा सामेल गर्नु भयो भने यसले हार्ट अटेक जस्तो गम्भीर समस्याबाट मुक्त गर्द्छ।आउनुस हेरौ यो कुरा कति साचो हो त?
सलगममा फाइबर भरपुर मात्रामा हुन्छ जसले गर्दा यो दिशा राम्रोसग खलास गर्न ठुलो सहयोग पुराउदछ। यदि तपाई कब्जियतको समस्या बाट पिडित हुनुहुन्छः भने यसको सब्जी अवस्य खानुहोस। त्यसैले इमुनिटी पावरलाई मजबुत बनाउने हो भने तपाई सलागमको सब्जी प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। यदि तपाई बारम्बार सर्दी खोकी तथा ज्वरो बाट पिडित हुनुहुन्छा भने सलागमलाई आफ्नो खानामा समाबेस गर्नुहोस यसबाट अवस्य फाइदा मिल्नेछ। यो इमुनिती पावरलाइ मजबुत बनाउन मा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ।
पोषक तत्व र फ़्लेवोनोइदस ले भरिपुर्ण यो सब्जीले तपाईलाई सधै सधै स्वस्थ राख्दछ। हड्डी लै बलियो बनाइ मुटुको लागि उत्तम विकल्प हो सलगम। भिटामिन र पोटासियम बाहेक सलगम क्याल्सियम को लागि पनि एक उत्तम श्रोत हो , जसले हड्डीको स्वास्थ्यलाइ अझ मजबुत गर्न मा मद्दत गर्दछ। खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्नमा पनि सलगम राम बाण साबित छ। सलगम मा पित्त या बाईल को सोस्न सक्ने अधिक क्षमता हुन्छ जसले शरीरमा भएको खराब कोलेस्ट्रोल को लेबल कम गर्नमा मदत पुग्दछ।
यसरि यो सब्जिले मुटु रोगको खतराको कम गर्न मा धेरै ठुलो सहयोग गर्दछ। यदि उच्च रक्तचाप लाई कम गर्नुछ भने तपाई सलगम लाई खान सक्नु हुने छ। एक अध्ययनका अनुसार सलगम मा पोतासियामको मात्रा अत्यधिक हुन्छ जसको कारणले धमनी फैलाउन र शरीरबाट सोदियामको अधिक मात्रालाई घटाउन ठुलो मद्दत गर्छ।
Prevबेकिङ सोडा र एप्पल भिनेगरको यसरी गर्नुहोस् प्रयोग हट्नेछ , ब्ल्याकहेड्स वाइटहेड्स
Next४० कटेसी फेरि महिलाहरुमा किन यौन चाहना तिब्र हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य !